अभिनेत्री आरती सिंह पानीमा बोल्ड पोज दिइरहेकी थिइन ! - bampijhyala.com
Home > मोडल ग्यालरी > अभिनेत्री आरती सिंह पानीमा बोल्ड पोज दिइरहेकी थिइन !
अभिनेत्री आरती सिंह पानीमा बोल्ड पोज दिइरहेकी थिइन !
९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९ bampijhyala
गोविन्दको भान्जी र ’बिग बाँस १३ फेम आरती सिंह (आरती सिंह) ले पानी डुंगामा यस्तो केही पोज दिएकी थिईन् । यसै गरी उनी आन्दोलनको सिकार भई बचेकी छिन । यी फोटोहरू आरती आफैले उनको इन्स्टाग्राममा साझेदारी गरेका छन् । हास्य कलाकार कृष्णकी बहिनी र गोविन्दकी भान्जी अभिनेत्री आरती सिंह बिग बाँसको बखत उनको सरलताको लागि मन पराइएको थियो । तर अब उनको शैली धेरै परिवर्तन भएको छ ।
अभिनेत्री लगातार आफ्नो बोल्ड शैली को तस्वीरहरु प्रशंसक र शुभचिन्तकहरुको लागी साझा गदै आएकी छिन् । तर यस पटक उनले साझा गरेको तस्वीरका कारण उनलाई पनि ट्रोल गरिएको छ र सहानुभूति पनि पाउँदैछ । यस्तै गरी केही तश्विरमा आरती जेट स्कीमा बिकिनी लगाएर पोज दिने प्रयास गरिरहेकी थिइन । जस कारण उ ओप्स मोमेन्टको शिकार हुनबाट बच्यो ।
उनले बिकिनीमा कम्मरमा स्कार्फ बाँधेर राखीन्, जुन उनको असंतुलनका कारण धेरै हदसम्म उडेको छ, यस तस्विरमा उनका प्रशंसक र शुभचिन्तकहरू नाराजगी व्यक्त गर्दैछन् र भन्दै छन् कि उनले आरतीबाट त्यस्तो आशा गरेन ।
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि आरतीले यी दिनहरुमा आफ्नो typecast छवि तोड्न बोल्ड तस्विरहरु बाँडफाँड गरिरहेछन् भनी जि न्यूजमा उल्लेख गरिएको छ ।
हजुरको आजको दिन, २०७८ जेठ ९ गते, आइतवार, २३ मे २०२१
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत पार्टी दर्ता, कलम चुनाव चिन्ह
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९
लघुकथा–पढ्ने रहर ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५९